प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई असहिष्णु नेताको समूहले कति दिन थेग्ने होलान् ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई असहिष्णु नेताको समूहले कति दिन थेग्ने होलान् ?
२०७७ चैत्र २४, मंगलवार ०५:२०:००
प्रधानमन्त्री केपी ओली पछिल्लो समय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छन् । उनले सीधा राजनीति गर्दैनन् । उनका कुनै पनि राजनीतिक योजना आफू वरिपरि नै घुमिरहेका हुन्छन् । उनले प्रतिस्पर्धी दल तथा नेताहरूलाई जहिले पनि लल्कारिरहेका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर उनका सल्लाहकार र विश्वासपात्र पनि अरू प्रतिस्पर्धी दल र तिनका नेताहरूप्रति राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै असहिष्णु रहेका छन् । उनले आफ्ना विरोधीरूप्रति घृणा र आक्रोशको आगो ओकल्ने नेताहरूको बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधपछि त असहिष्णु नेताहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्न गएको छ । उनीहरूले कम्युनिष्ट अभियानमा ठूलो योगदान गरेर आएका तथा लोमो समय सहकार्य गरेका नेताहरूलाई पनि अपराधी सरह ओरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई यसो गर्नु त स्वाभाविकै भयो ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा बोल्नेहरू कसैलाई पनि छाडेका छैनन् । राजनीतिक रूपमा यस्तो असहिष्णु नेताहरूको समूहले केपी ओलीको राजनीतिलाई कति समय टिकाइरहने होलान् ? सबैको चासोको विषय बन्न गएको छ ।
राजनीतिमा कोही पनि शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ । यसको अर्थ हो राजनीति भनेको समय परिस्थिति अनुसार अघि बढ्छ । कुनै दल वा नेता कुनै विषयमा असमत भएर टाढिन गए पनि अन्य विषयमा सहमत हुन सक्छन् । राजनीतिमा सार्वजनिक रूपमा गरिने टिप्पणी तथा आरोपलाई राम्रो मानिन्न । अझ सत्तारुढ दलका नेताहरूले गर्ने टिप्पणीलाई अराजक मानिन्छ । यसको कारण हो कुनै पार्टीका नेताले अपराध गरेको हो भने सरकारले वैधानिक रूपमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ, होइन भने आरोप लगाउने सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरू वा नेताहरू नै अराजक तथा मर्यादाहीन मानिन्कछ । उनीहरूको यस्तो व्यवहार व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन नै हो ।
सार्वजनिक रूपमा लगाइने आरोप प्रमाणित नगर्ने र नहुने तर नेताहरू बारम्बार त्यसैमा रमाइरहनु सभ्य राजनीति होइन । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारदेखि दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरू व्यक्तिगत आक्षेप, आक्रोश तथा रिसइबीमा उत्रनुले उनको राजनीतिलाई लामो समय टिकाइरहला र ?
अन्य दल तथा नेताहरूप्रति असहिष्णु, कटाक्ष तथा आरोपमा रमाउनेमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापा, पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटादेखि नवप्रवेशी मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, मन्त्री लेखराज भट्ट तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू पनि पर्छन् । सूर्य थापाले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहलाई अपारधीको मुख झल्झली सम्झना आउँछ भन्दै आफ्नो ट्वीटमा लेखे । जब कि सो समूहका नेताको योगदान सामान्य नेताको योगदानसँग तुलना गर्न सकिन्न ।
गोकुल बास्कोटाले विकास निर्माणका कामहरू देखेर प्रेसर बढेको भए अझै बड्नेछ भन्दै अन्य पार्टीका नेताहरूमाथि तीतो पोखेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहितका नेताहरू असहिष्णु र कटु बोलीबाट विरोधी नेतारूलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्नेनमा देखिन्छन् ।
सम्भावना भएको मानिएका तथा राजनीतिमा केही आशा गरिएका नेताहरू पूर्ण रूपमा असहिष्णु देखिनु भविष्यको शिष्ट लोकतान्त्रिक राजनीतका लागि सुखद् होइन । यसले सहकार्य, सहमति तथा नैतिक बलको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्छ ।
जिम्मेवार नेताहरूको असहिष्णु राजनीतिक व्यवहारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालका लागि लाभप्रद भए पनि दीर्घकालसम्म टिकाउन कठिन छ । उग्र र असहिष्णु राजनीतिले संसारका कुनै पनि नेतालाई स्थापित गरेको छैन । अझ नेपालमा नेतामा रहेको उग्र व्यवहारलाई आमजनताले स्वीकार गरिरहेको अवस्था छैन । जनताले कम्युनिष्ट शक्ति अराजक नबनोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । परक–फरक दल भए पनि सद्भावका साथ राजनीति गरून् भन्ने चाहेका छन् ।